Izizathu Ezi-7 Kungani Amafomu Okuhola Afile | Martech Zone
Izizathu Ezi-7 Kungani Amafomu Okuhola Afile
NgoMsombuluko, Januwari 30, 2017 NgoMgqibelo, Januwari 28, 2017 UMuhammad Yasin
Kokubili abathengisi bedijithali nezitolo zezitini nodaka bahlala bezingela izindlela ezintsha nezintsha zokubamba imikhondo eminingi futhi bayiguqulele kumakhasimende akhokhelayo. Ukusho ukuthi lokhu kuyinselelo enkulu kungaba yinto eshaqisayo, njengoba ukufika kwe-intanethi sekwenze umncintiswano waba lukhuni kuyo yonke imboni ongayicabanga.
Kuyo yonke le minyaka, abathengisi babeka amafomu "Xhumana Nathi" kuwebhusayithi yabo ngethemba lokuthi iziphequluli ezinentshisekelo zizoxhumana nazo. Lawa mafomu "Xhumana Nathi" yilokho thina bakhangisi bedijithali esikubiza ngokuthi "Amafomu Okuhola Okuqinile;" futhi ngenkathi basebenza inhloso cishe eminyakeni eyi-10-15 edlule, abasasebenzi ngempumelelo njengakuqala. Eqinisweni, bengizosho ngisho nokusho bafile impela.
Njengoba ngishilo kuma-athikili adlule, imidiya exhumanisayo iya ngokuya ithandwa kakhulu kubathengisi (bobabili abedijithali nezitini nodaka), futhi isusa ngokushesha isidingo sezindlela zokuhola. Noma kunjalo, ungahle uzibuze "Uma abathengisi besasebenzisa amafomu wokuhola we-static, kungani ubabheka njengabafile?"
Nazi Izizathu Ezi-7 Zokuthi Amafomu Okuhola Afile:
1. Akekho Ofuna Ukugcwalisa Amafomu Aqinile
Kule minyaka embalwa edlule, amafomu wokuhola we-static abe yinto nje yomhlobiso. Akekho osabheka amafomu okuhola ngempela; futhi ngokungagwegwesi, labo abathengi abatholi lutho oluyigugu ngokuthumela imininingwane yabo. Ngemuva kokuthi bahambise imininingwane yabo yokuxhumana, kuba sengathi ingena emgodini omnyama… kuze kube yilapho umthengisi esebabiza, yebo.
Ngemuva kokuthi abathengi bethumele imininingwane yabo yokuxhumana, ithemba ukuthi othile ovela enkampanini uzobuyela emuva ngolwazi nangezinsizakusebenza abazifunayo. Manje, uma kukhona engikufundile njengokuthenga kaningi online, inhloso yangempela yalawa mafomu ukuthola imininingwane yabo yokuxhumana bese ubathengisela okuthile. Kwesinye isikhathi imikhondo iyondliwa, futhi kwesinye isikhathi ayikhuliswa. Noma ngabe ikuphi, iningi labathengi eligcwalisa ifomu lokuhola ngokuzithandela kungenzeka ukuthi lisezingeni eliphezulu lokuthenga (noma esigabeni socwaningo) - okusho ukuthi abakakulungeli ukuthenga okwamanje.
Lapho kwaba iphuzu ngesikhathi lapho ukugcwalisa ifomu lokuhola eli-static kwakuyinto nje abathengi abayenzayo ukuthola imininingwane eyengeziwe. Kodwa-ke, ngokufika kwe-intanethi, abathengi baye bakhetha ngokukhethekile ngemikhiqizo nezinsizakalo abazitshala kuzo - futhi kufanele! Kunezinketho eziningi kakhulu abathengi abangakhetha kuzo, ngakho-ke bathatha isikhathi sokwenza lolo cwaningo. Uma besafuna imininingwane eyengeziwe, mhlawumbe abafuni ukuthengiswa kuyo ngokushesha.
Okuhlangenwe nakho okusebenzisanayo (noma amafomu wokuhola asebenzisanayo) ngokushesha kudlula amafomu wokuhola we-static njengendlela ekhethwayo yokubanjwa kokuhola phakathi kwamabhizinisi aku-inthanethi. Isizathu salokhu yingoba ivumela abathengi ukuthi babe nezingxoxo ezibandakanya izindlela ezimbili newebhusayithi yakho ukuze bathole izimpendulo abazifunayo.
Ake sithi, isibonelo, umthengi ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izinketho zezimali ezingcono kakhulu esimweni sabo ngaphambi kokuthenga ifenisha. Isibonelo esihle sokuhlangenwe nakho okubalulekile kokusebenzisana kungaba ukuhlolwa okuhlaziya umthengi ngawodwana (ngokususelwa kulwazi oluyingqayizivele abalunikezayo) futhi ibanikeze isisombululo esizwakalayo. Lokhu-ke kuholela ephuzwini lethu elilandelayo….
2. Okuhlangenwe nakho Okusebenzisanayo Kukhiqiza Amanani Okuzibandakanya Okuphezulu
Ngokungafani namafomu wokuhola we-static, okuhlangenwe nakho kokusebenzisana kuvumela abathengi ukuthi babe nengxoxo newebhusayithi yakho. Esikhundleni "sokugcwalisa izikhala" (Igama, i-imeyili, ucingo, ukuphawula), ingxoxo yenzeka ngochungechunge lwemibuzo nezimpendulo. Ngenxa yalokhu, amazinga okubandakanya amawebhusayithi ngokuvamile aphezulu kakhulu kunalawo amawebhusayithi anamafomu wokuhola we-static.
Enye yezinhlobo zokuhlangenwe nakho ezivame kakhulu ukuhlolwa. Kokuhlangenwe nakho kokuhlola, imikhiqizo ibuza abathengi imibuzo ehlukene ukuze bafinyelele eziphethweni ngabo futhi ibanikeze isixazululo esingaba khona enkingeni yabo yamanje. Ake sithi, isibonelo, umthengi uvakashela iwebhusayithi yezakhiwo zokuhlala futhi uzama ukuthola ukuthi yiluphi uhlelo lwangaphansi abazohamba nalo (futhi kuningi ongakhetha kukho). Kuvela ukuthi lokhu kuyinkinga ejwayelekile kubaqashi abaningi abazoba khona. Indlela enhle yokuxazulula le nkinga futhi ikhulise ukuzethemba kwabathengi ukudala ukuhlolwa okunikeza iziphakamiso zohlelo oluphansi. Kokuhlangenwe nakho, iwebhusayithi ingabuza imibuzo efanelekile yokukhetha (Isb: "Bangaki abantu emndenini wakho? Unazo izingane? Ingabe unezilwane ezifuywayo ezinkulu?, Njll.") Nezimpendulo ezinikezwa ngumthengi zinganikeza isiphetho .
Manje, uyaqonda ukuthi ngiqonde ukuthini uma ngithi "abathengi bangaba nezingxoxo newebhusayithi yakho?" Iwebhusayithi ibuza imibuzo bese umthengi ephendula ngezimpendulo zaleyo mibuzo. Ngoba izingxoxo ngokuvamile zithatha isikhathi eside kunokumane ugcwalise ifomu, lokho kusho ukuthi ukubandakanyeka kuwebhusayithi yakho nako kujwayelekile. Ngokwengeziwe, ngemuva kokuthi umthengi anikezwe isisombululo esingaba khona (ake sithi, ngenxa yokuchazwa, kuyikamelo lokulala 2, ipulani lokugezela elingu-1.5), maningi amathuba okuthi umthengi azofuna ukuhlala kuwebhusayithi yakho futhi enze ucwaningo oluncane ngalelo khambi (noma uhlelo lwaphansi, kunalokho) Amafomu wokuhola aqinile awanikezi isisombululo ngokushesha; ngakho-ke yisiphi isizathu sangempela umthengi okufanele ahlale kuso kuwebhusayithi yakho aze abizwe ngabathengisi? Kungakho ukubandakanyeka kuvame ukuba phansi kakhulu kumawebhusayithi anamafomu wokuhola we-static.
3. Ngokuzibandakanya Okuphezulu Kuza Ukuguqulwa Okuphakeme
Njengoba ngishilo ngaphambili, abantu abanandaba nje nokugcwalisa amafomu wokuhola we-static. Futhi, imininingwane yabo iya kokungaziwa okungaziwa (kuze kube yilapho bebhejwa ngumthengisi, okuyinto evamise ukwenzeka) futhi abemukeli lutho lwenani ngokushesha ngemuva kokuthumela imininingwane yabo yokuxhumana. Ngezindlela eziningi, abathengi bazizwa sengathi bayakhohliswa. Bathenjiswa okuthile okuyigugu, kepha ungayitholi njalo. Kungakho abathengi bengasagcwalisi amafomu wokuhola we-static.
Esinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani umsebenzi wokuhlangenwe nakho okusebenzisana uphumelela kangaka yingoba kuvumela ama-brand ukuthi enze izethembiso angazigcina! Esikhundleni sokulinda imininingwane eyengeziwe evela kumthengisi wokuthengisa, bangathola isisombululo kungakapheli nemizuzu ethile. Uma abathengi baqinisekiswa ngezixazululo ezisheshayo, ngeke nje baqale isipiliyoni; bazoqedela isipiliyoni futhi baguqule kusuka kumthengi babe ukuhola okugcwele. Abathengi abafuni ukulinda omunye umuntu ukuze abanikeze inani lokuhweba ngemoto yabo, futhi abafuni ukuphindisela ohlelweni olubizayo olungadingekile efulethini. Abathengi bakhetha ukubeka amaqanda abo kubhasikidi owodwa kuqala ngaphambi kokungena esigabeni sokuthenga / sokuqashisa.
Isixazululo senkinga yomthengi yisikhuthazo sokugcina sabo sokuqedela ulwazi. Ngiqonde ukuthi, okuhlangenwe nakho okusebenzayo kungathatha isikhashana (ngoba abathengi badinga ukuphendula imibuzo ukuze bathole imiphumela yabo), kepha uma ngabe kusho ukuthola into eyigugu ezobasiza ngokushesha ngesinqumo sabo sokuthenga, bazothatha isikhathi esengeziwe. Futhi ukuze sicace bha, izinkuthazo zingaba yinoma yini oyifunayo. Kungaba yinani lokuhweba, ukuhlolwa (noma ukubika), isigqebhezana noma isaphulelo, i-e-book - noma yini inhliziyo yakho efisa ukuyenza.
4.Okuhlangenwe nakho Okusebenzisanayo Kukwazi Ukwenza Ngokwezifiso Kakhulu
Akunandaba ukuthi ubani ovakashela iwebhusayithi yakho, amafomu wokuhola ama-static azobukeka futhi asebenze ngendlela efanayo. Kunesikhala sokugcwalisa igama lakho, inombolo yakho yocingo, ikheli lakho le-imeyili, futhi kwesinye isikhathi kunesikhala semibuzo noma sokuphawula. Lokho empeleni yisilinganiso esigcwele samafomu wokuhola we-tuli. Kwesinye isikhathi ungashintsha umbuzo, futhi kwesinye isikhathi awukwazi. Noma ngabe ikuphi, ngokuyinhloko kungumkhumbi wokuthwebula imininingwane yokuxhumana - futhi akukho okudlula lokho.
Okuhlangenwe nakho okusebenzisanayo, noma kunjalo, kunamathuba angapheli wokwenza ngokwezifiso. Okuhlangenwe nakho okusebenzisanayo akugcini ngokubhekela izinhloso zebhizinisi lakho kuphela, kepha kunakekela nezidingo zabathengi bakho. Okunqunyelwe kuphela kokuhlangenwe nakho okudalayo ukuthi uthembisa okuthile okuyigugu. Kungaba ukuhlolwa, isaphulelo, inani lokuhweba, ukungena kwe-sweepstakes - noma yini ezokhanga isisekelo sakho sabathengi ngokwanele ukubenza baqedele isipiliyoni.
Ngaphandle kokukwazi ukwenza ngokwezifiso uhlobo lwesipiliyoni sangempela (futhi wenze ngezifiso imibuzo), enye into epholile ukuthi umkhiqizo wakho unolawulo oluphelele ekubukekeni kwesipiliyoni sokusebenzisana. Konke kusuka kusikimu sombala, kuya ezithombeni, futhi okubaluleke kakhulu, ukufaka uphawu kophawu, kuncike ngokuphelele ekuboneni komdali. Iyiphi indlela engcono yokwenza umkhiqizo wakho ube semthethweni kunokuwuhlanganisa namafomu wakho wokuhola asebenzisanayo? Hhayi kuphela ukuthi umthengi azokwazi ukuthi imininingwane iya kuwe ngqo, kepha umkhiqizo uzoboleka umbono wokuthi bathola lokho abakucelayo.
Ngicabanga iphuzu engizama ukulenza ukuthi zonke lezi zinhlobo zesipiliyoni ziyaheha. Akuyona ifomu elisobala elikuvumela kuphela ukuthi ufake umbhalo. Abathengi akusadingeki ukuthi "bakhulume nodonga." Iwebhusayithi yakho ingaqoqa imininingwane ethile kumthengi futhi ikhiqize okuthile okuyigugu ngokususelwa kulwazi oluqoqiwe. Ifomu eliholayo eli-static alikwazi ukukwenza lokho.
5. Kulula Ukuzihlukanisa Nabantu Oncintisana Nabo
Noma amafomu e-static lead ayiyona indlela edumile yokuthi abathengi babuze ngolwazi oluthe xaxa, kusenamathani ezinkampani ezikhetha ukushaya lawa mafomu kumawebhusayithi awo. Futhi ngenkathi inani lemikhiqizo ehlanganisa okuhlangenwe nakho kokusebenzisana likhula ngokuqinile, umkhiqizo wakho uzogqama kakhulu phakathi kwabancintisana nabo. Kungani? Hhayi-ke, ake sisho okusobala - hhayi wonke umuntu usebenzisa okuqukethwe okusebenzisana ngezidingo zabo zokubamba. Uma ubeka noma yiluphi uhlobo lwesipiliyoni sokusebenzisana kuwebhusayithi yakho, kuzovela ngokushesha kubathengi bakho. Esikhundleni sokugcwalisa ifomu le-tuli elijwayelekile balinde impendulo, baphendula imibuzo nokuthile okuyigugu. Okuhlangenwe nakho kukodwa kuhluke KAKHULU.
Okwesibili, akumele sikhohlwe ngesici sokwenza ngokwezifiso samafomu wokuhola asebenzisanayo. Ukubukeka kwefomu lokuhola elisebenzisanayo akugcini nje ngokugqama engqondweni yomuntu, kodwa ulwazi lwangempela (ukuhlolwa, ukuhlolwa kwezentengiselwano, imibuzo, umdlalo, njll.) Ngeke kukhunjulwe futhi into okungenzeka ukuthi izimbangi zakho azikho ' Ngiyakwenza…. okwamanje.
6. Amafomu Wokuhola Aqinile Awakwazi Ukuthwebula Inani Lezinto Ezidingwa Abathengisi Bedijithali
Yiziphi izinkambu ezivame kakhulu ozibona kwifomu lokuhola eli-static? Igama, ifoni, ikheli le-imeyili, uhlobo lophenyo (imvamisa luyehla) kwesinye isikhathi indawo yokuphawula neyokubuza. Lokho akuyona yonke imininingwane eminingi, akunjalo? Imininingwane yokuxhumana yomthengi ayinikezeli ukuqonda kokuthi yini eyenza lowo mthengi ahluke. Akukho lwazi maqondana nokuncamelayo kokuthenga, umugqa wesikhathi wokuthenga, izintshisekelo zabathengi - uhlu luyaqhubeka. Ngoba kuncane okwenziwe ngokwezifiso okubandakanyeka namafomu wokuhola we-static, awukwazi ukubuza abathengi imibuzo ngezinto izinto umkhiqizo wakho ofuna ukwazi ngazo.
Njengoba unikezwe ukuthi amafomu wokuhola asebenzisanayo enziwa kanjani, umkhiqizo wakho unolawulo oluphelele kunoma iyiphi imibuzo ebuziwe. Uma ufuna ukufunda kabanzi ngalokho umthengi anentshisekelo yokukuthenga noma uma enentshisekelo yokufunda ngezinketho zezezimali, okumele ukwenze nje ukubuza. Kubalulekile ukubuza le mibuzo ethile kubathengi bakho ngoba kukusiza wena (umakethi wedijithali) ukuthola ukuqonda okungcono kwesisekelo sabathengi bakho nokuthi ungabathengisa kanjani ngokuzayo.
Ngaphezu kokusiza abathengisi bedijithali njengawe, iqembu lakho lokuthengisa (uma likhona) lingakwazi ukuhlunga imininingwane etholwe phansi iye ezingeni lomuntu ngamunye, lakhe amaphrofayili wabathengi futhi lenze ngezifiso ukulandelwa kwabo kususelwa kulwazi oluyingqayizivele kuphrofayela yabo.
7. Abathengi Bagcina Ulwazi Oluningi
Kanye nokukwazi ukubuza imibuzo eyingqayizivele, okuhlangenwe nakho okusebenzisana nakho kunikeza ama-brand ithuba lokwazisa nokuhlala phezulu kwengqondo. Ngemuva kokuthi umthengi eseqedile okuhlangenwe nakho kokusebenzisana kuwebhusayithi yakho (futhi esethole isikhuthazo sabo ngesimo sokuhlola, ukuhlolwa, isaphulelo, njll.), Umkhiqizo wakho unganikeza imininingwane ebaluleke kakhulu - mhlawumbe ngokuthi ungasisebenzisa kanjani ngempela isikhuthazo ababeyiso kuhlinzekiwe. Ake sithi, isibonelo, ungumthengi ovakashela iwebhusayithi yomthengisi. Ugcwalisa ukuhlolwa kokuhweba bese unikezwa inani lokuhweba kwakho.
Manje-ke? Yebo, lokho kudayisa kunganikeza imininingwane eyengeziwe kulokho abangakwenza ukuqinisekisa lezo imithwalo yemoto ebanjiwe ukuthola inani elikhulu kunakho konke ukuhwebelana kwabo. Kungaba ngesimo sezinketho ezengeziwe zokuhlangenwe nakho kokusebenzisana. Isipiliyoni esisodwa singahlola ukuthi kufanele yini bathenge “okusetshenzisiwe noma okusha,” kanti okunye kungaba ngokuthola izinketho zezimali ezihamba phambili. Noma ngabe yikuphi okuhlangenwe nakho okukhethiwe, lolo lwazi olungeziwe luvumela abathengi ukuthi bacabange ngempela ngazo zonke izinqumo abazenzayo nomkhiqizo wakho. Futhi, masithembeke ngokuphelele - lapho beba phezulu kakhulu engqondweni futhi umkhiqizo wakho ugqama ngokwengeziwe, maningi amathuba okuthi umthengi akwazi ukukhumbula umkhiqizo wakho.
Tags: okuqukethwe okusebenzisanayoukumaketha okusebenzisanaimidiya exhumanayoamafomu okuholaamafomu okuhola afileamathuluzi wokumakethaI-PERQama-CTA ahlakaniphile
UMuhammad Yasin unguMqondisi Wezokumaketha kwa-PERQ (www.perq.com), kanye noMlobi oshicilelwe, enenkolelo eqinile ekukhangisweni kweziteshi eziningi okuletha imiphumela ngezindlela ezijwayelekile nezamadigital. Umsebenzi wakhe ubonwe ngokugqama ezincwadini ezifana ne-INC, i-MSNBC, i-Huffington Post, i-VentureBeat, i-ReadWriteWeb, ne-Buzzfeed. Isizinda sakhe ku-Operations, Brand Awareness, kanye ne-Digital Marketing Strategy kuholela endleleni eqhutshwa idatha ekudalweni nasekugcwalisekeni kwemikhankaso yokukhangisa yemidiya esabekayo.
Kungani Siphinde Sabuyela futhi Sashintsha Isizinda Sethu saba iMartech.zone
Ukunakwa Kwabathengi: Ukuthengisa Kuthola Ukubuyekezwa Okungaphezulu Kokudlela ku-Yelp
Jan 30, 2017 ku-9: 09 AM
Sikubonile ngokuphelele lokhu. Amafomu e-static aphenduke izicupho zogaxekile ngenkathi ukuhlolwa nokusebenzisana, amakhasi okubandakanya aqhuba imikhondo engcono nokuguqulwa. I-athikili emangazayo!
Jan 30, 2017 ngo-2: 04 PM
Ingabe unezibonelo ezinhle zalokhu? Ngicabanga ukuthi iphuzu lenziwe kahle futhi lithwala isisindo. Kodwa-ke, ukushiya amazwana, kufanele ugcwalise amafomu ama-3. #isibaya
Jan 30, 2017 ngo-2: 09 PM
Okuhamba phambili. Beka amazwana. Njalo.
Mar 1, 2017 ku-10: 10 AM
Indatshana efundisayo! Kwaziswa kakhulu. Kepha ngicela uqaphele lapho unikeza izibonelo. Umphakathi wamafulethi ubuza ukuthi “Unazo izingane?” kuzobe kwephula umthetho we-Federal Fair Housing Act. Isimo somndeni saba isigaba esivikelwe ngo-1988. Ngibonga kakhulu!
Mar 1, 2017 ku-10: 14 AM
Iphuzu elihle - ngiyabonga ngokuqwashisa ngalokho!